Bible Mu Nsɛm Gideon ne Ne Mmarima 300 No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
WUHU nea ɛrekɔ so wɔ ha no? Eyinom nyinaa yɛ Israel akofofo. Mmarima a wɔakotokotow no renom nsu. Ɔtemmufo Gideon ne ɔbarima a ogyina wɔn nkyɛn pɛɛ no. Ɔrehwɛ sɛnea wɔnom nsu no.
Hwɛ akwan horow a mmarima no nam so nom nsu no. Ebinom de wɔn ano bɔ nsu no mu ankasa. Nanso wɔn mu biako de ne nsa saw nsu no bi na watumi ahwɛ nea ɛrekɔ so. Eyi ho hia efisɛ Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ ɔmpaw mmarima a wɔbɛkɔ so ahwɛ nea ɛrekɔ so bere a wɔrenom nsu no. Onyankopɔn kae sɛ ɔmma nkae no nsan nkɔ fie. Ma yɛnhwɛ nea enti.
Ná Israelfo no rehu amane kɛse bio. Nea enti a ɛte saa ne sɛ wɔantie Yehowa. Midianfo anya wɔn so tumi na wɔrehaw wɔn. Enti Israelfo su frɛɛ Yehowa, na Yehowa tiee wɔn.
Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ ɔmmoaboa dɔm ano, enti Gideon boaboaa akofofo 32,000 ano. Ná dɔm a wɔne Israel rebɛko no yɛ 135,000. Nanso Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ: ‘Wo nnipa no dɔɔso dodo.’ Dɛn nti na Yehowa kae saa?
Nea enti a ɛte saa ne sɛ sɛ Israel di nkonim a, wobesusuw sɛ ɛyɛ wɔn ankasa mmɔdenbɔ. Ebia wobesusuw sɛ wonhia Yehowa mmoa na wɔadi nkonim. Enti Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ: ‘Ma wɔn a wosuro nyinaa nsan nkɔ fie.’ Bere a Gideon yɛɛ eyi no, mmarima 22,000 san kɔɔ fie. Ɛkaa nnipa 10,000 pɛ a wɔne asraafo 135,000 bɛko.
Na tie! Yehowa kae sɛ: ‘Wo nnipa no da so ara dɔɔso dodo.’ Enti ɔka kyerɛɛ Gideon sɛ ɔmfa wɔn nyinaa mmra nsu yi ho mma wɔmmɛnom nsu, na ɔmma wɔn a wɔkotow de wɔn ano bɔ nsu no mu no nsan nkɔ fie. Yehowa hyɛɛ bɔ sɛ: ‘Mɛma wode mmarima 300 a wɔmaa wɔn ani daa hɔ bere a wɔrenom nsu no adi nkonim.’
Ɔko bere no dui. Gideon kyɛɛ mmarima 300 no mu akuw abiɛsa. Ɔmaa obiara abɛn, ne kuruwa a gyatɛn wom. Bɛyɛ ɔdasum no, wɔn nyinaa twaa atamfo asraafo no ho hyiae. Na bere koro mu no wɔn nyinaa hyɛn wɔn mmɛn bobɔɔ wɔn nkuruwa no, na wɔteɛɛm sɛ: ‘Yehowa ne Gideon nkrante!’ Bere a atamfo asraafo no sɔree no, na wɔn nyinaa ayɛ basaa na ehu aka wɔn. Wɔn nyinaa fii ase guanee, na Israelfo dii nkonim.
Atemmufo ti 6 kosi 8.
Ɛyɛɛ dɛn na amanehunu bebree aba Israelfo so?
Adɛn nti na Yehowa ka kyerɛɛ Gideon sɛ mmarima a ɔde wɔn rekɔ ko no dɔɔso dodo?
Bere a Gideon kaa sɛ wɔn a wosuro no nsan nkɔ fie no, mmarima baahe na ɛkae?
Hwɛ mfonini no na ka ɔkwan a Yehowa nam so tew Gideon mmarima no so maa wɔkaa 300 pɛ no.
Ɔkwan bɛn so na Gideon kyekyɛɛ mmarima 300 no mu, na ɛyɛɛ dɛn na Israel dii nkonim?
Kenkan Atemmufo 6:36-40.
Ɛyɛɛ dɛn na Gideon huu nea Yehowa pɛ?
Yɛyɛ dɛn hu Yehowa apɛde nnɛ? (Mmeb. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)
Kenkan Atemmufo 7:1-25.
Dɛn na yebetumi asua afi nnipa 300 a wɔmaa wɔn ani daa hɔ ne wɔn a wɔamma wɔn ani anna hɔ no hɔ? (Atem. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efe. 5:15-17)
Sɛnea nnipa 300 no hwɛɛ Gideon suaa no no, ɔkwan bɛn so na yɛhwɛ Gideon Ɔkɛseɛ, Yesu Kristo sua no? (Atem. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pet. 2:21)
Dɛn na ɛwɔ Atemmufo 7:21 a ɛboa ma yehu sɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani sɔ baabiara a yɛsom wɔ Yehowa ahyehyɛde no mu? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Yak. 4:10)
Kenkan Atemmufo 8:1-3.
Sɛ asɛm bi ba yɛne yɛn nua bi ntam a, dɛn na yebetumi asua afi sɛnea Gideon ne Efraimfo siesiee wɔn ntam no mu? (Mmeb. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luka 9:48)